အိမ်မှာအသားစားကြက်မွေးမြူရေး - ကြက်စာကျွေး, စောင့်ရှောက်ခြင်း
အိမ်မှာအသားစားကြက်မွေးမြူရေး - ညာဘက်အကြောင်းအရာ၏လျှို့ဝှက်ချက်များ
မွေးမြူနှင့်များစွာသောလယ်သမားဖို့အိမ်ပြန်အကျိုးစီးပွားအတွက်အသားစားကြက်မွေးမြူရေး၏ပွုစုပြိုးထော။ ကြက်အချိန်တိုအတွင်းကိုယ်အလေးချိန်ရရှိမှုနှင့်သုံးလအကြာတွင်လုပ်ကြံခြင်းအဘို့အဆင်သင့်ရှိပါသည်။ သို့သော်အသားစားကြက်မွေးမြူရေး - ငယ်ရွယ်သူတို့တွင်သေဆုံးမှုကာကွယ်တားဆီးဖို့ capricious ကြက်ကအခက်အခဲများနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်မည်သို့မည်ပုံ, သူတို့ရဲ့တိုးတက်မှု၏အင်္ဂါရပ်များသိရန်အရေးကြီးသည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနာမကျန်း။
ဧပြီ - Young ကတိရိစ္ဆာန်များကိုမကြာခဏမတ်လဝယ်ယူနေကြသည်။ ကြက်၏စည်းမျဉ်းများ:
အသားစားကြက်မွေးမြူရေးအိမ်တွင်းထုတ်လုပ်ရန် - ကျီထဲမှာ, ပို့ရေးဌာနအပေါ်နွေရာသီမီးဖိုချောင်တွင်။ 1 မီတာ2ကြမ်းပြင် 8-9 နမူနာတင်လိုက်တယ်။ အခန်းထဲမှာတောက်ပသောခြောက်သွေ့မူကြမ်းကနေအခမဲ့ဖြစ်သင့်သည်။
ငှက်အိမ်များအနီးတွင် 1.5-2 မီတာ2မှ 10 ကြက်၏နှုန်းမှာအသေးငယ်တဲ့ paddocks mesh စီစဉ်နိုင်ပါတယ်။ ငယ်ရွယ်သူတို့ကခြောက်သွေ့ပူနွေးတဲ့ရာသီဥတုမှာထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။
ဒါကြောင့်မကြာမီအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထည့်သွင်းထားတဲ့အသားစားကြက်မွေးမြူရေး၏ဖောက်အကောင်းဆုံးဆည်းပူးခြင်းနှင့် fruitfully ကြီးထွားလာငှက်တို့သည်နေရာဖြစ်သည်အလျင်စလိုလုပ်ဖို့လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်:
Ross - အဖြူရောင်အမွေးအတောင်နဲ့အတိုအရပ်နှင့်အတူ 308 ငှက်တို့သည်လည်း။ တစ်နေ့လျှင်တစ်မူထူးခြားတဲ့ဖောက်, အလေးချိန် 55 ဂရမ် increments ။ 2.5 ကီလိုဂရမ်အထိအလေးချိန် 6-9 ပတ်ကြာကြက်သား၏အသက်အရွယ်မှာအရွယ်ရောက်ပြီးသူငှက်တစ်နှစ်လျှင် 185 ကြက်ဥကိုပေးသည်။
COBB - 500 ထူးခြားတဲ့တိကျတဲ့ - အဝါရောင်အရောင်, အဖြူရောင်အမွေးအတောင်။ သတ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန် - 40 နေ့ရက်ကာလအဘို့, ဤအချိန်ကာလအတွင်းကြက်သား 2.5 ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိပြီး။ အဆိုပါဖောက်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေး၏ကွဲပြားခြားနားသောတံခါးခုံ, အလေးအစားအစုတခုရှိပါတယ်။
အသားစားကြက်မွေးမြူရေး - M ကတစ် stocky တည်ဆောက်နှင့်တကွ, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့်အသားနှင့်ကြက်ဥမှတိတ်ဆိတ်ခွဲဝေနေကြသည်။ 162 ကိုအပိုင်းပိုင်း - ကြက်၏5လကြာအတူဥ, ဥထုတ်လုပ်မှုအိပ်လေ၏။ တစ်နှစ်လျှင်။
နေအိမ်အလုံအလောက်သေးငယ်တဲ့ကြက်အိမ်သူအိမ်သားပစ္စည်းကိရိယာများမှာအသားစားကြက်မွေးမြူရေး - သောက်နှင့် လမ်းခွဲ ။ တိုင်း4ကြက်သားထဲမှာ 1 - ကြက်ဥထုတ်လုပ်မှုများအတွက်အိပ်တန်းထားဖို့လိုပါမယ်။ ဘယ်အချိန်မှာသူတို့ထဲကအသားစားကြက်မွေးမြူရေးစောင့်ရှောက်မှုများ၏ content အခန်းအတွက်သန့်ရှင်းမှုကြောင့်ယူဆတယ်။ ကောက်ရိုး, သစ်သားရိတ် - ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာကြမ်းပြင်ခြောက်သွေ့အဆင်ပြေစောင့်ရှောက်ရန်စုပ်ယူစုဆောင်းနိုင်သောဖန်ဆင်းရပါမည်။ အမှိုက်သရိုက်များမကြာခဏဖုကာကွယ်တားဆီးဖို့နှိုးဆော်နှင့်စိုစွတ်သော, စိုစွတ်သောအမှိုက်သရိုက်များလာပြီခြောက်သွေ့သောနေရာတွင်ဖယ်ရှားဖြန်းဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်ပါတယ်။ စိုစွတ်သောဗုဒ္ဓဟူးနေ့ - သေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိတစ်ဦး hotbed နှင့်နွားများ၏ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
လစဉ် Nestle တနေ့သုံးကြိမ်တိုက်ကျွေးနေကြသည်။ အဆိုပါရိက္ခာပရိုတိန်း, ဗီတာမင်, ပရိုတိန်း (ဆေးဖက်ဝင်အပင်များမုန့်ညက်), ပြောင်းဖူး, ဂျုံတို့ပါဝင်သည်သငျ့သညျ။ နံနက်ယံ၌သူတို့ပြောင်းဆန်, ပြောင်း, ဂျုံနဲ့မုယောစပါးတစ် mash ပေးအပ်ထားတယ်။ သူတို့ကိုသင် beets, မုန်လာဥနီ, အသား, ငါး, အသားနှင့်အရိုးမုန့်ညက်နှင့်အတူဟင်းချိုချက်ပြုတ်လို့ရပါတယ်။ ကြုံတွေ့ကြက်ပြုတ်ဂျုံ, အာလူး, ပွတ်-beet နှင့်အတူရောနှောငှက် ostuzhennoy ပုံစံနှင့်မြက်ခွံသို့အခြောက်များနှင့်ကျွေးမွေး၏။ ထို့အပြင် duckweed, giblets နှင့်လတ်ဆတ်တဲ့ငါးပေးပါ။ အစားအသောက်များတွင်၏ replenishment အဘို့ကောင်းသော option ကို - စက်ဝိုင်း၏ပုံစံအတွက်စာတောင့်, spheres ကို။ အသားစားကြက်မွေးမြူရေးအဘို့အစာကျွေးခြင်း၏အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်:
ပြောင်းဖူးမုန့်ညက် - 45%;
နေကြာဆီကိတ်မုန့် - 17%;
အရိုးမုန့်ညက် - 17%;
နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရဂျုံ - 13%;
မုန့်ညက်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များနှင့်မြေဖြူတွေသုံးပြီး - 1%;
တဆေး - 5%
feed fats - 3% ။
မွေးမြူခြင်းနှင့်အိမ်တွင်အသားစားကြက်မွေးမြူရေး၏မွေးမြူစနစ်တကျဆောင်ရွက်ကြပြီးသမားရိုးကျကြက်ထက်, အိမျတျော၌အအေးနှင့်သန့်ရှင်းမှုပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်ကြောင်းအကောင့်သို့ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအစသူတို့ကမကြာခဏ paddock အပေါ်ထွက်ကုန်အံ့နေကြသည်အကြံပြုသည်မဟုတ်, မဟုတ်ရင်ငှာကွိမျအများကြီး, သူတို့ကပိုပြီးတဖြည်းဖြည်းစုပြုံပါလိမ့်မယ်။ အပြည့်အဝစောင့်ရှောက်မှုနှင့်နို့တိုက်ကျွေးရေး - ကြီးထွားလာအသားစားကြက်မွေးမြူရေးကြက်များအတွက်ကြက်ငှက်လယ်သမားများ၏အာရုံစူးစိုက်။ လယ်မြေမှာငှက်ပဌမနေ့နှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးကိုထိန်းညှိရန်ရှိသည်။ အသားစားကြက်မွေးမြူရေးကြက်များ၏ content:
ငယ်ရွယ်သည့်လူဦးရေမီ, အိမ်သူအိမ်သားခြောက်သွေ့, သန့်ရှင်းရေးထုတ်လုပ်ရန်။
1 မီတာ2နှုန်း 1 ကီလိုဂရမ် - 0.5 နှုန်းမှာ slaked ထုံး၏လိင်မှိန်အလွှာ။
10 စင်တီမီတာ (sawdust, ကောက်ရိုး) အလွှာဖြန်းအမှိုက်သရိုက်များအထက်။
17 နာရီထက်မနည်း - ထိုအလငျး၏ပထမဦးဆုံးလတစ်လအတွင်း၌ပြီးနောက်နာရီဝန်းကျင် lit ရမည်ဖြစ်သည်။
1 အပတ်ကမှ - 32-28 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (တစ်နေ့လျှင် 1 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တို့ကလျော့ကျသူတို့မှအဆင်ပြေအောင်နေကြ);
အပတ်က2- 28-25 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်; ။
3rd နှင့် 4th ရက်သတ္တပတ် - 24-20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်; ။
အသက်တာ၏ 2nd လ - 18-20 ° C တို့
ပထမဦးဆုံး5ရက်အတွင်း - ဂျုံပြုတ် mash, ပြုတ်ကြက်ဥ, ဖျက်စီးရမဲ့ဂျုံနှင့် Oats ။
5 ရက်အကြာမှာ, အစားအစာအခြောက်မှဆက်ပြောသည်။ စွန့်ပစ်စားခြင်းနှင့်အစားအစာကြက် - စိမ်ဘီစကွတ်, ပေါင်မုန့်, အာလူးပြုတ်။
အစားရေ2ပတ်ကြာ, သူတို့ရဲ့ထောပတ်များအတွက်အသုံးဝင်သောတစ်ဦးအရက်သောက်ပန်းကန် whey သို့သွန်းလောင်းဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နေ့လျှင် 5-7 ဂရမ် - ရိက္ခာအုပ်ချုပ်ငါးနှင့်အသားနှင့်အရိုးမုန့်ညက်မှာ 10 ရက်နှင့်အတူ။
အဆိုပါသောက်အတွင်းရေနေ့တိုင်းပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။2ကြိမ်တစ်ပါတ်သီးခြားစီအူလမ်းကြောင်းရောဂါ၏အသွင်အပြင်ကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်ပိုတက်စီယမ်နိတ်၏အားနည်းဖြေရှင်းချက်သို့သွန်းလောင်းလေ၏။
အသားစားကြက်မွေးမြူရေးဘောဇဉ်မှစတင်နေကြသည် 11 ရက်အတွင်းအတူ - က zaparivayut, မြေပြင်, အရိုးမုန့်ညက်, ဝါရင့် whey, ဒိန်ချဉ်သို့မဟုတ်ဟင်းချိုနဲ့စိုစွတ်သော mash အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
မြေတပြင်လုံးအစေ့ရန်သွန်သင်အသက်အရွယ် tsyplyatok လနှင့်အတူ, မထိုက်မတန်ဂေါ်ဖီထုပ်၏အရွက်, zucchini, ရွှေဖရုံသီး, beet ထိပ်, dandelions greens ။
ဒါဟာရေထဲမှာရောဟာစိုစွတ်သော mash တဆေး (ထိုအရောအနှော 10 ကီလိုဂရမ်လျှင် 200 ဂရမ်) ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
Farmazin - ရေထဲမှာရောအမှုန့် (ရေ 1 လီတာမှရံပုံငွေ 1 ဆ) တစ်ဦးပဋိဇီဝဆေး tylosin ပါဝင်သည်။
Enroflon - ရောဂါကူးစက်မှုကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့။ ရေ 10 လီတာနှုန်း5ml - အစီအစဉ်ကိုမှေးမှိန်။
Vetom 1.1 - Anti-ဗိုင်းရပ်စ်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူ immunomodulator ။3နာရီ။ ရေ 1 လီတာနှုန်းဇွန်းမှေးမှိန်။
ဤရန်ပုံငွေများလူငယ်တိရိစ္ဆာန်များ၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကိုအားကောင်းဇီဝြဖစ်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, သူတို့ရဲ့တိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရှိန်အဟုန်မြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ ဖြည့်စွက်၏ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အအသုံးဝင် salmonellosis နှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာစနစ်၏ရောဂါများ။ သူတို့ကအထိ 100% ၏နွားများ၏ရှင်သန်မှုနှုန်းကိုတိုးမြှင့်။ Propaivayut ငှာကွိမျပထမဦးဆုံး5ရက်။ အလှည့်နှင့်သာလောလောလတ်လတ်ပြင်ဆင်ထားဖြေရှင်းချက်ပေးသညျ။ ကုသမှုစဉ်အတွင်းအစားအစာမူးယစ်ဆေးတွေထဲကနှင့်အတူရေကိုသာစွန့်ခွာသောက်ဖယ်ထုတ်။
Aspergillosis ။ - ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး, ကြက် wheezing, မစားကြဘူး။ ဒါဟာမူကြမ်းပပျောက်ခြင်းနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအဘို့မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်များ၏ content ပေါ်မှာရှိသမျှသောအခြေအနေများဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်, ပဋိဇီဝဆေးနဲ့ကုသနေပါတယ်။
Salmonellosis ။ - လေကြောင်းချီမျက်ရည်စက်လေးတွေအားဖြင့်မှတဆင့်ကူးစက်သော။ ရောဂါလက္ခဏာများ: ကြဲကြဲမျက်စိ, ဝမ်းလျှော, ရောင်ရမ်း cloaca, အစာစားချင်စိတ်မရှိခြင်း။ streptomycin နှင့် furazolidone တစ်သင်တန်းထွန်းလင်း။ ကာကွယ်ဆေးထိုးကိုယ်ခံစွမ်းအားသွေးရည်ကြည်ရဲ့ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့။ တစ်ဦးကနေမကောင်းမဟုတ်ဘဲသတ်တစ်ဦးချင်း, ကျန်ရှိနေသေးသော propaivayut chloramphenicol ။
Pulloroz ။ ရောဂါလက္ခဏာများ - အဖြူရောင်ဝမ်းလျှော, အသက်ရှုမဝြခင်း, ရေငတ်။ တစ်သတ်မှတ် insulator တွင်လည်း biomycin သို့ထားရှိနေမကောင်းကြက်နှင့် furazolidone ကြွင်းသောအစာကျွေးဖို့ထည့်သွင်းထားသည်။
Rickets ။ ဗီတာမင် D ကိုတစ်ဦးမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့, ထိုငျးငှာကွိမျ၎င်းတို့၏ခြေထောက်ပေါ်ကျလိမ့်မည်။ အစားအစာထဲမှာဗီတာမင်တစ်သင်တန်းသတ်မှတ်ထားသောကုသမှုများအတွက်ကယ်လစီယမ်ကဆက်ပြောသည်နေကြသည်။ ဤသည်မှာနွားဖြစ်ကောင်းအနီးကပ်စိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်ပြီး, ထိုငျးငှာကွိမျအသုံးဝင်သောလတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေဖြစ်ပါသည်။
ကြှနျုပျတို့မညျသို့ Bunny အစာကျွေး, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်မဟုတ်နိုင်နိုင်မလဲ?
ခွေးတစ်ဦးကို tick ရဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အဆိုပါကြောင်ရဲ့ခြေသည်းပေါ်မှာ silicone pads
မိမိလက်နှင့် Lounger ခွေး
ငါးမွေးကန်များအတွက် LED မီးခွက်
Discus - ထိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်စောင့်ရှောက်မှု, aquarists များအတွက်အရေးကြီးဆုံးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို
အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ Adzhika သခွားသီး - ပုံမှန်မဟုတ်သောချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်အရသာကွက်လပ်
အကျပ်အတည်းကလေးတစ်ဦး၏3နှစ်
အိတ် 2016 - ခေတ်ရေစီးကြောင်း, သဘောထားတွေနဲ့ခေတ်ရေစီးကြောင်း
ကလေးများအတွက်နားကိုက် - နာကျင်မှုဖြစ်ပေါ်စေသည်နှင့်အထူးသဖြင့်ကလေး၏ကုသမှု
ကမ္ဘာ၏စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်များကို - ယောက်ျား